बच्चालाई गाली गर्नुभएको छ भने ‘सरी’ भनेर तुरुन्त गल्ती सुधार्नुहोस्, यसो गर्दा आफू पनि दुःखी छु भनेर बताउनुहोस् | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeफागुन २८, २०७७ chat_bubble_outline0
डा. साक्सका अनुसार बच्चा भावनामाथि नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् त्यसैले तुरुन्त व्यक्त गर्छन् । उनीहरुको ठाउँमा बसेर सोच्नुहोस् । हामीमध्ये धेरैजना यो स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं । महामारीले आर्थिक, मानसिक तनाव यति धेरै बढाइदिएको छ कि अभिभावकले धैर्य गुमाउने गर्छन् । यो स्थितिलाई कुराकानीमार्फत् सम्हाल्न सकिन्छ ।
जर्ज वासिङ्टन युनिभर्सिटी स्कूलमा मनोचिकित्सककी विशेषज्ञ डा. पूजा लक्ष्मिनका अनुसार बच्चालाई बेस्सरी गाली गर्नु सामान्य हो तर उनीहरुमाथि कहिल्यै पनि शारीरिक वा भावनात्मक रुपमा नकारात्मक व्यवहार नगर्नुहोस् । उनीहरुको बारम्बार मजाक नउडाउनुहोस्, प्रेममा कहिल्यै पनि कमी नगर्नुहोस् । यसले उनीहरुलाई नकारात्मक महसुस गराउन सक्छ । तर तपाईं सधैं यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको बच्चालाई थप हेरविचारको आवश्यकता छ भन्नेतर्फ संकेत गर्छ । यसका लागि डाक्टरको पनि मद्दत लिन सक्नुहुन्छ ।
‘विवाहले पुरुषलाई अत्यधिक लाभ, महिलालाई हानीबाहेक केही गर्दैन’ विज्ञको दाबीमा सुरु भयो बहस